Warehouse Archives - Glory Assumption Space
Warehouse Assistant - Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်ရှိ Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်အလိုရှိသည်။ 2. Warehouse Assistant – Female (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်(အထက်) / ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်။ • ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူ ဖြစ်ရမည်။ • သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ၁ နှစ်အနည်းဆုံးရှိသူဖြစ်ရမည်။ • သာကေတမြို့နယ်ရှိ ဂိုထောင်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ • အသက် ၃၀ နှစ်အောက်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံပေါ်မူတည်၍ လစာညှိုနှိုင်းနိုင်သည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါကဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail-gasrecruit.cv@gmail.com,gasrecruit.hr5@gmail.com/, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone Number - 09- 262223783 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09262223783,09263121101, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Assistant Officer, Warehouse – Male / Female -3 Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်(အထက်)/ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
မင်္ဂလာပါရှင်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော Manufacturing ကုမ္ပဏီကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းအမြန်လိုအပ်နေပါသည်။ 8. Assistant Officer, Warehouse – Male / Female -3 Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်(အထက်)/ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် •	Bachelor’s Degree with at least (2) years of experience in administration or related field •	Be able to operateacomputer with MS office •	Training certificates institutes approved by Company in requirement course •	Medical certificate •	Good knowledge of troubleshooting techniques skills •	Good communication skills of speaking and writing in English •	Good interpersonal skills and able to communicate with workers and sub-contractors မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Ø Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Ø Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ Ø E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Ø Phone Number - 09- 262223783 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Ø Viber Phone Number – 09263121101 ,09262223783, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTCØ ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး ) ။